Semalt: Umgang Mit Unerwünschten E-Mails Ugaxekile
Ngaba uke wavula i-imeyile yakho kwaye ufumene i-imeyili engamawaka angabhalwanga kwiibhokisi lakho lebhokisi engenayo, iipesenti ezingama-95 ezingenalo umdla wokufunda? Kwiimeko ezininzi, uya kucelwa ukuba ususe i-imeyile apha naphandle, kodwa umsebenzi unokubandakanya ucinga ukuba kufuneka ube nesibindi sokuqinisekisa ukuba awuyi kucima i-imeyile yomdla. Oku kunokuba kunzima xa uqaphela ukuba kufuneka uphinde uphinde ulandele iiveki elandelayo.
Oku kubonisa indlela ingxaki ye-imeyile eyanda ngayo, kunye nomxholo ongafunekiyo kwaye ungabonakali oza kubhokisi lakho lokungena kwiindawo apho ufuna ukucima yonke i-akhawunti. Nangona kunjalo, oku akunakwenzeka kuba i-imeyili ixhunyaniswa ne-Facebook, i-eBay, i-PayPal, njl njl, kwaye ukususa i-imeyile kuya kubangela intlekele yohlobo olukhethekileyo.
U-Ross Barber, uSemalt uMphathi weNtuthuko yabaThengi, uxela indlela ezi ndlela ezine eziye zamnceda ukuba athole i-akhawunti yakhe kwi-spammers:
1 - oculos ray ban redondo espelhado. Ukulandelela umthombo ohlala uthumela ii-imeyili ezingafunekiyo. Musa ukusebenzisa indlela enobuqili equka ukususa ii-imeyile. Vula elowo kubo kwaye ungabhalisi kwaye emva kokuba wenze njalo, khangela idilesi yomthumeli kwi-imeyile yakho. Emva koko, kuthathwa njengekhuselekile ukususa yonke into ephuma ngaphandle kwoluhlu lwakho lweziphumo. Ngenxa yokuba ungabhalwanga phantsi, awuyi kuphinda ufumane i-imeyile evela kwimithombo.
2. Umthetho ufuna ukuba zonke ii-imeyile zezorhwebo kufuneka zikhethiweyo. Naphezu kwemfuneko, ndaqonda ukuba uninzi lwamakhemeli angafunekiyo alukhutshwanga okanye aluyikubhalisa iimpawu. Xa uqaphela ukuba ufumana i-imeyile evela kumthombo ongenanto yokukhetha ukuphuma, thumela le imeyile elandelayo:
"Kucelwa uthathe (faka idilesi yakho ye-imeyile) kule imeyili evela kuhlu.
Akukho mfuneko yokongeza nayiphi na enye ingcaciso ukususela apho i-imeyile ingena kwindawo. Kufuneka ulindele impendulo ngendlela "Yenze!" njengobungqina bokuba uphumelele ngokukhawuleza umbandela we-imeyile engafunekiyo.
3. Ukudala iifolda kukuvumela ukuba uhambe ngokukhawuleza nge-imeyile yakho ehamba phambili. Oku kungenelelo olungcono malunga nokulawula i-imeyile kuba kukunceda ukujongana ne-imeyile engenayo kwaye ugcine ibhokisi lemilayezo engenayo icocekile. Ngokomzekelo, ndadala iifolda ezisixhenxe kwi-imeyile yam kwaye ndawanika amagama ahlukeneyo kuxhomekeke kwendima yabo ephambili. Ukuba ndifuna ukugcina i-imeyile, iya kugcinwa ngokupheleleyo kwelinye lala mafolda. Oku kubaluleke ekuqinisekiseni ukuba ibhokisi yam ebhokisi engenayo ihlambulukile kwaye ihlambulukileyo ngamaxesha onke.
4. Xa usukwazi ukulungisa i-imeyile yakho, ngokucacileyo awufuni ukubuyela kwimo yaso yangaphambili. Ukulawula ibhokisi lakho lokungenayo ngempumelelo ngokuqinisekisa ukuba uhlangabezana ne-imeyile engathandekiyo ngokukhawuleza. Ukuba unqanda oku, mhlawumbi uzakufumana kunye namawaka e-imeyile ukuze uhlele enye. Emva kokuba ii-imeyli ezingafunekiyo zakha kwakhona, unokuyilungisa imeko ngokuphinda isinyathelo esinye nesibini.